Umthandazo weKrisimesi ukugubha ixesha
Khumbula ukuba Kutheni siKhiyozela ixesha
Ixesha leeholide linokusenza sibe novuyo olukhulu kunye noxinzelelo olukhulu , ngoko ukuba umthandazo weKrisimesi ephaketheni lakho unokukunceda ukukhumbuze ukuba lexesha lixesha lokubhiyozela noxolo. Lo ngumhla esiwubhiyozela ukuzalwa kukaYesu, kwaye kukho into enokuyibulela ngayo. UYesu usinika ithemba kwaye ungumsindisi wethu. Nanku umthandazo weKrisimesi oguguzela ukuzalwa kweNkosi yethu nazo zonke izinto uThixo azenzayo ebomini bethu:
Thixo, siyabonga ngokuthumela uNyana wakho kuthi. Ndiyazi ngeli xesha lonyaka, sihlala sikhohlwe ukuba kutheni sigubha. Sivame ukubanjwa ngokucwangcisa amaqela kunye nokunika izipho esikulibala ukuba kutheni senza zonke ezi zinto kwindawo yokuqala. Nokuba nje sibanjwa ekuvuyiseni , nceda ndincede ndigcine amehlo am ngenxa yesizathu sokuzonwabisa. Makhe ndingalibali iimbambano kunye neengxabano ezithi uMariya noYosefu bajamelane nokuzisa unyana wakho, uYesu, ehlabathini.
Sekunjalo, Nkosi, makhe ndingalibali iintsikelelo owanike zona. Wabanika isipho esikhulu somntwana waza wabasikelela ngokukhusela ngexesha apho kubonakala ngathi abanakho ukuhlala kuyo. Kwaye ke wamzisa uMsindisi wethu kweli hlabathi kubazali ababini abanothando nabakholwayo abalinde ubukho bakhe.
Ngamana ndingamfumana amandla uYosefu noMariya abenayo xa uMariya ekhulelwe. Akumele kube lula ngabo ngelo xesha. Makhe ndibe nithembele kuwe njengoko befika eBhetlehem, apho bafumana khona igumbi esinquleni, bethemba kuwe ukubonelela. Uze ubenzele zona, unginika ithemba lokuba uya kuhlala uhlala kum. Ngamana ungahlala unamandla wam kunye nomboneleli wam.
Andiyi kucinga ngombingelelo wakho, Nkosi, kodwa ndiyazi ukuba ndiyasikelelwa yiyo. Ndiyazi ukuba yonke imihla ndiziva ubukho bakho kwaye ndikhangele ngehlabathi ngokumangaliswa kwindalo yakho. Ngaloo nyaka, njengoko ndiyayihobisa umthi, kulo nyaka njengoko ndiyicula i-Christmas carols, mandikulibale ukuba iKrismesi ininzi kakhulu kunezipho kunye nezibane. Ndibone ngobungqina bentliziyo ukuze ndihlale ndigxilile ngokholo ngeli xesha. Uyazi ukuba ngamanye amaxesha ukholo lujamelene nenkcaso. Kukho amaxesha okungabaza okuzama ukungena kuwo. Kodwa wena usinike uNyana wakho, usitshengise ukukhanya, kwaye mayeke uhlale ekhokela amanyathelo am.
Kwaye ihlabathi mayifumane iintsikelelo endikufumene kuwe. Njengoko kunokuthi kuzwakala, makube nokuthula emhlabeni ngeli xesha. Masibe nethemba nothando ebomini bethu osisilethe ngokuzalwa kukaYesu. Lusuku oluqaqambileyo, kwaye ndivuyiswe ukuba ndiyakwazi ukubhiyozela kwaye ndikubhiyozele. Ndiyabulela, Nkosi, yonke into.
Nkosi, ndiphinda ndiphakamise abahlobo kunye nosapho kuwe. Ndicela ukuba uqhubeke ubeka iintsikelelo kubo bonke. Ndicela ukuba bakubone ekukhanyeni okukhazimulayo okuzaliswe ngothando lwakho. Ngamana siyakwazi ukugubha kunye kunye nokusinika sonke intliziyo omnye komnye.
Ndiyabonga, Nkosi. Ndiyabulela ngokuzisa uMsindisi emhlabeni, kwaye ndikubulela iintsikelelo zakho ebomini bam. Amen.
Ukucamngca kwiimfihlakalo ezimnandi zeRosari
7 Imithandazo Yentsapho YamaKristu
I-Saint Patrick Breastplate (Lorica)
I-Albhamu ephezulu ye-Urban Gospel
Iimpahla Zokomoya NezoPhilisa zikaJade
6 I-Warmup ye-Pre-Game Exercises for Your Youth Basketball Team
Usuku lweMbali - Imithombo yamabanga aPrayimari neeSondari
Ithimba Umizoomi: Iifoto kunye nabalingiswa